Windows Media Player bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu software eji maka egwu na-akpọ ọdịyo na video faịlụ. Ezie na ọtụtụ ndị na-eji ya dị ka ha ndabere music ọkpụkpọ, ndị ọzọ na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla ọzọ mgbasa ozi ọkpụkpọ mma karịa Windows mgbasa ozi ọkpụkpọ nke na-abịa tupu arụnyere na windows arụ ọrụ usoro. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe na anya na obi na-adị gị omenala Windows Media Player, mgbe ahụ, e nwere ọtụtụ ụzọ na-eme ya. Otu onye dị otú ụzọ na-agụnye na-agbanwe agbanwe isiokwu nke mgbasa ozi ọkpụkpọ. Ozugbo ị na-agbanwe isiokwu nke gị Windows Media Player, ị ga na-eche dị ka ma ọ bụrụ na ị na-eji a kpamkpam dị iche iche ọkpụkpọ. E nwere ọtụtụ gburugburu na ahịa nke dị maka free. Ihe niile ị chọrọ ime bụ; budata ha na ịtọ ya na gị na mgbasa ozi ọkpụkpọ.
Nkebi nke 1: Top 10 skins / gburugburu maka Windows Media Player
Part 2: Olee ịgbanwe akpụkpọ / isiokwu nke Windows Media Player?
Lee ndị top 10 kasị mma gburugburu maka Windows Media Player:
1. Satin isiokwu:
Satin isiokwu bụ ọchịchịrị isiokwu na nwa dị ka ọ na isi agba. The atụmatụ na buttons-adị mfe inweta. Ọ bụ kpam kpam free isiokwu na-haziri karịsịa maka WMP 10.
2. Stalker isiokwu:
Aha: Stalker- agbọpụta Chernobyl
Nke a bụ otu kacha isiokwu maka Windows Media Player 11. The gara aga gburugburu site na nke a Mmepụta ugbua chịrị ahịa n'ihi na ezi oge ụfọdụ ma ugbu a, ha na-azụ na ukara Stalker isiokwu. Ụda mmetụta bụ X-akpata nke a pụrụ iche na isiokwu.
Download Url: http://skinister.devianart.com/art/STALKER-48666813.
3. BlueEye isiokwu:
Nke a isiokwu e mepụtara maka Windows Media Player 9 na nwere ụfọdụ pụrụ iche pụrụ iche mmetụta na a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ atụmatụ dị ka equalizer, playlist, video mode na Ama mode.
4. Skinister media center isiokwu:
Aha: Skinister media center
Mepụtara site Skinister, a na isiokwu e mere karịsịa maka Windows Media Player 10. The isiokwu e mepụtara na ebumnuche na-enye mma ọrụ ahụmahụ bụ nke na-mfe iji.
5. iTunes snow isiokwu:
Aha: iTunes snow
The iTunesSnow isiokwu ya haziri karịsịa maka Windows Media Player XP. Na ọ bụ dị atọ mara mma agba nke-acha anụnụ anụnụ, nwa na-graphite. Ịnwere ike ibudata a kpam kpam free isiokwu si download njikọ nyere.
6. Lost Planet isiokwu:
Aha: Lost Planet
Capcom bụ aha n'azụ ọtụtụ revolutionary kenkwukorita ntụrụndụ ngwaahịa. Hụrụ na 1983, Capcom ka a tọhapụrụ ma ọzọ na-akpali isiokwu maka Windows Media Player 11. Nke a isiokwu na-agụnye ụfọdụ ndị dị nnọọ obere atụmatụ dị ka eserese, sọrọ shutters na ụda olu mmetụta. The Mmepe na-na-na-eme atụmatụ nyak egwuregwu "furu efu planet" n'oge na-adịghị ya na ọrụ nke isiokwu nwere ike ikwu na egwuregwu.
7. iMac G4 imezi isiokwu:
Aha: iMac G4
Nkowasi: Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na iTunes isiokwu, mgbe ahụ, iMac G4 imezi isiokwu maka Windows Media Player bụ nhọrọ kasị mma maka gị! Nke a isiokwu bụ dakọtara na Windows Media Player 10 na-adọta ya n'ike mmụọ nsọ si QuickTime na iTunes.
8. Orion isiokwu:
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe na-akpali isiokwu na ọtụtụ atụmatụ maka gị Windows Media Player 10, mgbe ahụ, Orion bụ nke zuru okè oke maka gị. Ihe mgbaru ọsọ nke na mmepe bụ ịzụlite a ọrụ enyi na enyi isiokwu maka Windows Media Player na ike ịdọrọ mmasị ọrụ. Nke a isiokwu nwere ọtụtụ nke na-akpali atụmatụ dị ka ahaziri equalizer, na-aga aga na ọtụtụ ndị ọzọ.
9. WmpTunes isiokwu:
WmpTunes isiokwu ya mere karịsịa maka Windows Media Player 11 na na mmụọ nsọ site iTunes. E wezụga mara mma imewe nke a na isiokwu, ọ na-nwere ọtụtụ nke na-akpali atụmatụ dị ka gbara akpụkpọ equalizer, akpaaka zoro ezo olu akara na animated album aha displayer.
10. Tranformers isiokwu:
N'ike mmụọ nsọ site ama nkesa nkiri, a na isiokwu a na-mepụtara maka Windows Media Player 10. Ọ nwere ọnụ ọgụgụ nke na-akpali akpali atụmatụ dị ka animated trays na inetersting ụda mmetụta.
Ị nwere ike mfe ịgbanwe ọdịdị gị windows mgbasa ozi ọkpụkpọ site n'itinye ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe ya isiokwu. E nwere ọtụtụ gburugburu dị na internet nke nwere ike ibudata for free na etinyere na windows media ọkpụkpọ. E wezụga na-agbanwe agbanwe "Lee ma na-eche" nke ọkpụkpọ, ọtụtụ isiokwu na-enye ọtụtụ ndị ọzọ na-akpali atụmatụ kwa. Ebe a bụ ole na ole nzọụkwụ nke ị nwere ike ịgbanwe akpụkpọ / isiokwu nke gị Windows Media Player:
Nzọụkwụ 1: Mepee windows mgbasa ozi ọkpụkpọ
Mkpa ka ị na-emeghe gị windows mgbasa ozi ọkpụkpọ site ma na ịpị ya akara ngosi ma ọ bụ site na mmalite menu. Ọ bụrụ na ndị ọkpụkpọ bụ ugbua oghe, i kwesịrị ka ịgbanwee gaa na "mgba ọkụ ka ọbá akwụkwọ" mode maka n'itinye akpụkpọ / isiokwu.
Nzọụkwụ 2: Họrọ chọrọ akpụkpọ
Emeghe "View" menu wee họrọ "akpụkpọ chooser". Ugbu a, họrọ akpụkpọ / isiokwu na ị chọrọ site n'aka ekpe ebi ndụ. All ebudatara skins dị ebe a na ị pụrụ ịhụ isiokwu preview na nri ebi ndụ.
Nzọụkwụ 3: Gbasoo isiokwu
Ozugbo ị họrọla adabara anụ ahụ, pịa na "itinye akpụkpọ" button. Ịgbanwee gaa na "ọkpụkpọ mode" laghachi na ebre mode.
ImgBurn maka Windows 8 - Ọkụ ọ bụla Video ka DVD Mfe
Olee otú SPLIT Videos na Windows Live Movie Onye kere
> Resource> Windows> Top 10 skins / gburugburu maka Windows Media Player